किन पुरुषहरुलाई म बोल्ड हुँदा तनाव हुन्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
किन पुरुषहरुलाई म बोल्ड हुँदा तनाव हुन्छ ?
साउन ३१ । यही आउँदो भदौ १६ गतेदेखि सबै हलहरुमा रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘बादशाहो’ की मुख्य नायिका हुन्, इशा गुप्ता ।
याे पनि पढ्नुस के रोग लागेको थियो वास्तवमा कादर खानलाई ?